Lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 12, i-2019 0 Comentarios 8899
Kwenzekani ngempela lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali? Impela kwenzeke kuwe ukuthi uye kuphrofayela yomngane wakho Instagram futhi lowo mlayezo ocasulayo ubonakala kuwe; Kunezizathu eziningana zokuthi kungani lokhu kwenzeka. Lapha kulesi sihloko sizokhuluma ngezizathu ezingenzeka lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali.
Lo mlayezo uvame ukuvela lapho umuntu ekuvimbe ekuxhumaneni nomphakathi. Futhi lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali Yingoba uma usuvinjiwe, ukuxhumana nomphakathi kukususa ekusebenziseni amalungelo, kulokhu ubona noma uxhumana nomuntu okuvimbile.
I-Instagram ikutshela nini umsebenzisi ukuthi akatholakali?: Thola lapha!
Kulungile manje lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali kuzofanele uthole futhi ubheke ukuthi ngabe empeleni bekuvimbe yini noma kungenzekanga ukuphazamiseka okuthile. Enye yezindlela ezijwayelekile zokuqinisekisa ukuhamba isiphequluli esimweni se-incognito bese uthayipha kubha yokusesha i-URL ye-Instagram ngokufaka igama lephrofayili lomuntu ofuna ukumcinga.
Uma kwenzeka iphrofayili ibonakala kuwe ngendlela ejwayelekile, ngaphandle kokufaka i-akhawunti yakho ye-Instagram, kusho ukuthi bakuvimbele nakanjani. Ngakolunye uhlangothi, uma kuqhubeka kukubonisa umyalezo ofanayo ovela lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali Kusho ukuthi umuntu ususe noma uvale i-akhawunti yakhe kusukela kunethiwekhi yokuxhumana nabantu.
Kwezinye izikhathi, kwenzeka ukuthi uvimbele umsebenzisi, futhi ngaphandle kokuwuvula wona lowo “myalezo ongatholakalanga” uyavela; Kwenzeka lapho iphrofayili ivinjiwe epulatifomu le-Instagram isikhathi eside kakhulu. Uma kunjalo, bese sichaza ukuthi singayixazulula kanjani.
Izinyathelo zokuvula umsebenzisi
Thola isithonjana sephrofayela bese ufinyelela i-akhawunti yakho.
Bese ufaka isithonjana sezilungiselelo esise ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Lapho izinketho zibonisiwe, khetha eyodwa ethi "Izilungiselelo".
Kamuva, khetha inketho "Yobumfihlo Nokuphepha".
Uma lokhu sekuqediwe, faka isigaba se- “akhawunti Locked”.
Lapha uzokhonjiswa uhlu lwabo bonke abantu obavimbele ezinkundleni zokuxhumana. Khetha eyodwa ofuna ukuyivula.
Ekugcineni, kuzofanele ukhethe umugqa ozovela ezansi, bese uchofoza ku- "ukuvula".
Lapho zonke lezi zinyathelo seziphothuliwe, ungaya kwi-akhawunti yakho oyivulile bese ubheka ukuthi ngabe umyalezo wokuthi "umsebenzisi awutholwanga" awusabonakali yini. Uma kunjalo, kungenxa yokuthi uvule ngempumelelo umsebenzisi futhi bobabili bangaxhumana futhi.
Ungamvula kanjani umsebenzisi ongivalele ku-Instagram?
Abasebenzisi abaningi ku-Instagram bayazibuza ukuthi kungenzeka yini lokhu, futhi akunjalo. Ayikho indlela ekuvumela ukuthi wenze lesi senzo. Uma umsebenzisi ekuvimbile akukho ukubuyela emuva, ngaphandle kwalapho lowo muntu enquma ukukumvula endaweni ethile. Uma kwenzeka ube nokungezwani, kungcono ukucubungula ingxoxo yomuntu siqu bese ulungisa isimo ngaphandle kwenethiwekhi yokuxhumana nabantu.
Kulungile manje lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali Kukhona nokuthi kungenzeka ukuthi nguwe owenze ibhlokhi. Sincoma ukuthi ulandele izinyathelo ezichazwe ngenhla. Ngale ndlela, ungaxhumana futhi nomunye umuntu futhi okuphambene nalokho.
Iphutha ukuvula umsebenzisi we-Instagram
Elinye lamacala ajwayelekile ku-Instagram ukuthola abantu abavinjiwe ngoba bebenokungqubuzana komuntu siqu. Manje, lapho isimo sesilungisiwe, baya kuphrofayela yomsebenzisi ukuwuvula, kepha bathola inkinga ngesimo somlayezo. Lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali kuphrofayela yalowo muntu, kungadingeka ukuthi uguqukele kwenye indlela ukuyivula; Iya kwizinyathelo esizichazile ngenhla.
Esinye isizathu, lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali ukuthi omunye umuntu futhi okuvimbe. Kulokhu, lapho amaphrofayili womabili evinjiwe, futhi ngeke akwazi ukubona imisebenzi eyenziwe omunye. Ungase uzibuze, kungenzeka kanjani ukuthi omunye umsebenzisi angivimbe ngasikhathi sinye? Iqiniso ukuthi kulukhuni, kepha kepha akunakwenzeka ukulifinyelela.
Kodwa-ke, ngenxa yenqubekela phambili engapheli nokuvuselelwa kwe-Instagram isenzo esingenziwa. Lokhu kungenxa yezandiso eziningi nezinhlelo zokusebenza zeselula ezikuvumela ukuthi uvimbe umuntu okuvimbe kuqala. Kungakho, kaningi lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali futhi usuvele uvulele umsebenzisi, yingoba ukuvimbe wena.
Noma kunjalo, lokhu kungenzeka futhi ngenxa yamaphutha wohlelo lokusebenza; Ungahlala amahora ambalwa. Uma iqhubeka sincoma ukuthi ukhiphe futhi uphinde ufake uhlelo lokusebenza futhi, ngale ndlela izovuselelwa.
I-Instagram ikutshela nini umsebenzisi ukuthi akatholakali?: Ukuvinjwa okubumbene
Njengoba besishilo ngaphambili, lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali, noma uma uvimba umuntu futhi yena anyamalale ohlwini lwakho oluvinjelwe, kungenzeka ukuthi umuntu asuse i-akhawunti yakhe, akwenzile noma akuvimbe ngenxa yezicelo noma izandiso ezichazwe ngenhla.
Uma ufuna ukukuqinisekisa lokhu, ungathola umngani olandela umuntu ofanayo futhi akuhlole ukuze ubone ukuthi uyisusile yini i-akhawunti yakhe. Enye inketho ukuthi uya esipheqululini bese usesha imodi ye-incognito iphrofayili yalowo muntu ngaphandle kokufaka i-akhawunti yakho ye-Instagram.
Okunye okungenzeka ukuthi sibonga izinhlelo zokusebenza nezandiso esazikhulume ngazo ngaphambili, umsebenzisi usebonile ukuthi uyivimbile, yingakho futhi ekuvimbile. Akuyona into okufanele yenzeke, kepha umhlaba wezinkundla zokuxhumana ugcwele iminyakazo eminingi.
Uma kwenzeka uvule umuntu futhi ubonile ukuthi lowo muntu ukuvimbile, kunezisombululo ezingaba usizo kulezi zimo. Okulandelayo, sizokhuluma kancane ngakho.
Enye yezinto zokuqala ongasifaka isicelo ukubheka isithombe lapho lowo muntu ethegiwe khona bese uzama ukufaka iphrofayili. Ekuqaleni, i-Instagram ingakunika umyalezo othi "umsebenzisi akatholakalanga", ungapheli amandla. Qhubeka nokuzama kuze kube yilapho ubona amaphuzu amathathu akhombisa izilungiselelo ekhoneni eliphezulu kwesokudla sephrofayili. Uma sekuvele, uyayikhetha, ubheka inketho ye "ukuvula", ne-voila! Uzokwazi ukubona izincwadi zalowo muntu futhi.
Uma lokhu kungasebenzi kuwe, kunenye ikhambi. Zama ukungena kwikhompyutha, ngoba kufanele ulande uhlelo lokusebenza lwe-Instagram kusuka esitolo seMicrosoft. Uma lokhu sekwenziwe, landela zonke izinyathelo ezichazwe ngenhla ukuthola iphrofayili bese uyivula.
I-akhawunti yomuntu siqu ye-Instagram ivinjiwe: Yini okufanele uyenze?
Uma ufike lapha kungenxa yokuthi kungenzeka ukuthi uke waba yisisulu se-Instagram nokuvalwa kwe-akhawunti yakho ngaphandle kwesizathu. Kungakho ngale ndatshana, sizokhuluma ngezixazululo eziphambili ongazisebenzisa ukuvula ukuvula i-akhawunti yakho ye-Instagram futhi ukwazi ukuyisebenzisa ngokujwayelekile futhi.
Kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi lezi zixazululo zisebenza kuphela kuma-akhawunti asuswe i-Instagram noma akhubazekile. Uma ngakolunye uhlangothi, i-Instagram isuse i-akhawunti yakho, lezi zeluleko azikwazi ukusetshenziswa. Uma ngabe leli icala lakho, sincoma ukuthi udale i-akhawunti entsha ye-Instagram.
Indlela elula yokwazi ukuthi ngabe i-Instagram ivimbe noma ikhubaze i-akhawunti yakho, ukuthi uma ungena ngemvume, kuvela umyalezo olandelayo: "I-akhawunti yakho yenziwe yasebenza." Lokhu kusho ukuthi i-akhawunti yakho isasebenza, kepha ngeke ukwazi ukuyifinyelela. Imvamisa, lokhu kwenzeka uma wephule izinqubomgomo noma imigomo yokusebenzisa yesikhulumi.
Ukuqinisekisa ukuthi i-akhawunti yakho ikhiywe yini empeleni futhi ayisuswa, sincoma ukuthi ungene ngemvume kusuka kwenye ifoni. Uma ungafinyelela iphrofayili yakho, kuyizindaba ezinhle, ngoba azisuswanga. Kulokhu, i-Instagram ivimbele ukufinyelela ku-akhawunti yakho kusuka kufoni oyidalile.
Kungase kukuthande: Ungazi kanjani ukuthi uvinjiwe ku-Instagram?
Lapho i-Instagram ikutshela umsebenzisi ukuthi akatholakali: Phinda ungene ku-akhawunti yakho!
Imvamisa, lapho i-Instagram ivimba i-akhawunti, okwenziwa yipulatifomu ukuvimba i-ID yakho noma i-akhawunti yakho yakwaGoogle. Uma kwenzeka usebenzisa ifoni ye-Android, okufanele ukwenze ukudala i-akhawunti entsha ye-Google. Okulandelayo, sizochaza izinyathelo okufanele uzilandele:
Into yokuqala okufanele uyenze ukukhipha uhlelo lokusebenza lwe-Instagram.
Uma lokhu sekwenzile, yenza isipele yonke ifoni yakho.
Qala kabusha ifoni yakho kwisimo sayo sokuqala sefektri. Qinisekisa ukuthi unayo idatha eyisipele ephelele, ngoba izosuswa ngokuzenzakalelayo.
Dala i-akhawunti entsha yakwaGoogle.
Xhuma i-akhawunti entsha nefoni yakho.
Ekugcineni, landa bese ufaka uhlelo lokusebenza lwe-Instagram futhi.
1 I-Instagram ikutshela nini umsebenzisi ukuthi akatholakali?: Thola lapha!
1.1 Izinyathelo zokuvula umsebenzisi
2 Ungamvula kanjani umsebenzisi ongivalele ku-Instagram?
2.1 Iphutha ukuvula umsebenzisi we-Instagram
3 I-Instagram ikutshela nini umsebenzisi ukuthi akatholakali?: Ukuvinjwa okubumbene
3.1 Izixazululo ezingenzeka
4 I-akhawunti yomuntu siqu ye-Instagram ivinjiwe: Yini okufanele uyenze?
4.1 Lapho i-Instagram ikutshela umsebenzisi ukuthi akatholakali: Phinda ungene ku-akhawunti yakho!
Lapho i-Instagram ivala i-akhawunti
Julayi 13, i-2019